राशी अनुसारको व्यापार रोजे मालामाल, यस्तो छ राशी अनुसार फाप्ने व्यापार र क्षेत्र… हेर्नुहाेस् – Sawal Nepal ||The Power of Information
राशी अनुसारको व्यापार रोजे मालामाल, यस्तो छ राशी अनुसार फाप्ने व्यापार र क्षेत्र… हेर्नुहाेस्
एजेन्सी २०७६ श्रावण २८, मंगलवार १९:५० मा प्रकासित
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ । अझ एसएलसी उत्तीर्ण भएर आगामी दिनमा कुन विषय रोज्ने भन्ने बिलखबन्दमा रहेकाहरुका लागि यो सामाग्री अझ बढी सहयोगी बन्नसक्छ । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार करिअर, पढाई तथा व्यापार व्यवसायको सफलताका लागि राशिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यदि राशिलाई ध्यानमा राखेर पढाई, करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी हुन्छ । कुन राशिलाई कस्तो पढाई, करिअर र व्यवसाय गर्नु उत्तम मानिन्छ, आउनुहोस् हेरौं । मेष मेष राशि भएका व्यक्तिहरुका लागि गणित, फिजिक्स र अकाउण्ट बिषयमा अधिक सफलता मिल्छ । यी व्यक्तिहरुका लागि सेना, आर्किटेक्ट, अस्त्र, शस्त्र, बास्तुशास्त्र सम्बन्धी करिअर वा यस्ता बिषयसँग जोडिएको क्षेत्रमा व्यापार गर्दा उत्तम हुन्छ । यी क्षेत्रहरुसँग जोडिएर व्यापार गर्दा सफलता पाइन्छ । राशिमा मंगलको साथमा सूर्यको समेत उपस्थिति हुन्छ भने सरकारी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुन्छ ।
यी राशि भएका मानिसले अधिक सफलताका लागि रातो रंगको कपडा लगाउन आवश्यक हुन्छ । मुसुरो दाल दान गर्दा शुभ फल प्राप्त हुन्छ । वृष वृष राशिका मानिस कलाप्रेमी हुन्छन । यस्ता व्यक्तिहरु अभिनय, गायनमा जम्न सक्छन । अटोको व्यापार, इलेक्ट्रिक इक्वीपमेन्टको व्यापार समेत फाप्छ । यसैगरी, नाट्यकला, म्यूजिक सम्बन्धी व्यवसाय, आर्ट पेन्टिङ र जिओलोजीसँग सम्बन्धित व्यापार फाप्छ । यिनै क्षेत्रसँग जोडिएको व्यापार र व्यवसायमा यो राशि भएका व्यक्तिले सफलता पाउने संभावना बढी हुन्छ । यो राशिको स्वामी शुक्र हुन्छ, यसको अर्थ कपडा र किरानाको व्यवसाय पनि फाप्छ ।
कुम्भ यो राशि भएका व्यक्तिको कार्यक्षेत्र अधिकांश मकर राशिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । किनभने यी दुवै राशिको स्वामी शनि हो । यसका अतिरिक्त सेना, टेक्निकल, मेडिसिन क्षेत्रमा समेत सफलता प्राप्त हुन्छ । वनस्पति शास्त्र, गणित, फर्मा, इलेक्ट्रिकको बिषय समेत उत्तम हुन्छ । अधिक सफलताका लागि कालो वस्त्र लगाउने गर्नुहोस् र हनुमानजीको पूजा अर्चनामा ध्यान दिनुहोस् । मीन यो राशि भएका व्यक्तिका लागि अद्यात्म, मेटल बिक्रेता, भेइकल, इलेक्ट्रिक उपकरणको बिक्रेता, गुप्तचर विभाग, फायर सर्भिस र अदालती सेवामा अधिक सफलता प्राप्त हुन्छ । गणित, साइन्स र कमर्स र अन्य सबै बिषय शुभ नै मानिन्छ । अत्यधिक सफलताका लागि पहेंलो कपडा लगाउने गर्नुहोस् र शिव भगवानको पूजा गर्नुहोस् ।
के तपाईँ आफ्नो भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ ? घरमा गर्नुहोस यस्ता कार्य हुनेछ फलिफाप
मंगलबार भगवान गणेशको पुजा किन गरिन्छ ?
रुद्राक्ष किन लगाइन्छ ? यसको अद्भूत रहस्य जान्नुहोस् …
मंगलबार हनुमानको पूजा-पाठ यसरी गरे हुनेछ हर मनोकांक्षा हुन्छ पूरा
वास्तुशास्त्रअनुसार घरमा यी पाँच दोष भए टिक्दैन पैसा !